nhamo 2016 - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'nhamo 2016'
nhamo 2016 chipatara hondo masoja
Maticha haazivi zvaanoda!
Mateacher makanzi pfekai mauniform mukaramba. Hezvo nhasi hurumende yoti irikutanga kubhadhara mauniformed forces imi mochema. Saka munodei chaizvo?
nhamo 2016 mudzidzisi teacher nhamo zimbabwe hurumende
vasikana musasvora ma teacher
Askana musashore munhu kana asati aane mari muchiti moda vakomana vane mari. Rimwe gore umwe muskana akaramba Robert Gabriel Mugabe achiti ma teacher haana mari, nanhasi paanonzwa sirene yemotorcade anozvirova mbama.
nhamo 2016 mudzidzisi teacher Robert Mugabe
Masasi ekupenga - zvitunha hazvi biwi
Taikuudzai zivai maCompany ekushandira....isu vekuNYARADZO Hapana kana 1 akauya kuzo loota
nhamo 2016 harare protests 2016 anti mugabe riots 2016
Yambiro kune vari ku diaspora
Of phone calls from ALL numbers starting with +263. They are Zimbabweans looking for help, unofa nekukumbirwa hameno hako
nhamo 2016 diaspora
Tamba - Wadiwa Bond Note
P.O Box MY 123456789
Wadiwa Bond Note
Ndanyora ino tsamba kuti ndikuzivisevo kuti pano pauri kuda kuuya pabarika, huye US dollar ndiye achiri hake pamoyo womurume! Vana pula, pound, euro, yen naana metcazh vakatowoneka havo vakatodzokera vasati vasakadzwa.
Ini ndakambotsungirira asi zvino ndapfidza hangu, ndangogarira vana vangu! Ko ndichaendepi ndachembedzwa kudai?
Zvino huya hako wakagadzirira. Murume wawada unema domestic violence anotyisa chose. Haatye! Kana mapurisa aakutomutyawo. Saka wotosimba zvako.
Ndini wako akarambwa
nhamo 2016 mari reserve bank of zimbabwe us dollar rand bond notes
Chii chiri nani jere kana university
Hanzi Zimbabwe Prisons and Correctional services irikubetsera vasungwa kuti kana vabuda mutorongo waone mabasa ekuita but varikubuda mumauniversity varikushaya mabasa saka ndechipi chirirani kuenda kujeri kana kuuniversity?
nhamo 2016 jere University
nhamo 2016 mari baba nhamo rudo Madzibaba mutupo
N'anga uchatambura kwemakore gumi
MURAPWA: Asekuru ndauyawo kuti ndizonzwa kuti upenyu hwangu hwuri sei pamberi apa!
N'ANGA: "Iii mzukuru,ndiri kuona uchimbotambudzika zvakaoma kwemakore gumi!!"
MURAPWA:"Asi zvichizoita nani here kana 10years dzacho dzapfuura?"
N'ANGA: "Hongu,zvichaita nani nokuti unenge wajaira!"
nhamo 2016 nhamo n'anga
NMB haina withdrawal limit
Mari yanetsa, but vanoda easy access to their funds vhurai account neNMB.
And you can withdraw any amount that you want, no questions asked..
National Mattress Bank, unongoisa mari yako pasi pe mattress
nhamo 2016 zimbabwe reserve bank of zimbabwe cash shortage 2016 bond notes
Mhando dzevakadzi ne mari
Kune mhando dzevakadzi dzakati wandei, panoti
Zim dollar - ava vakadzi vakavimbika uye vasingadi nevarume vavo, they are very supportive.
Bearer cheque - aapa pane nyaya, unogona kubva kubasa ukawana aenda zvake, atoExpire, hapana zviripo.
US-Dollar - uyu haabve pamurume zvekumhanya, asi shanje, shanje kani, asi uuuum inhamo zvayo.
Bond-coin - apa ndopane nyaya, vanochengeta asi value yavo ndeyefake, ukasanyatsoona unoti wawana mukadzi asi hapana hapana.
Bond-note - haaaaa uyu mukadzi ane zvivindi, haadiwe asi anotouya chete. Kuvhundutsira pamusha, haatye kana munhu. Anotuka varidzi vepamba iye asati ambogarapo. Nembwa dzinotomuziva asati asvika.
nhamo 2016 mari bond coin reserve bank of zimbabwe us dollar zim dollar bond notes zim bearer cheque
vanhu havachadi kunzwa kuti bond
Jonso : ndipowo movie shaaa rekuona
Tino: ok ndokupa ya James BOND
Jonso: pfutseki! gara nemovie rako
Munhu hauchada kunzwa word Bond chete
nhamo 2016 reserve bank of zimbabwe bond notes James Bond
nhamo 2016 roora musikana bond notes
Bond Notes - mazita evana
nhamo 2016 reserve bank of zimbabwe bond notes
Bond Notes - ko naira nekwacha?
Hanzi heee bond harishande kunze... Heee bond zvakati zvikazoti.
Ko iro Kwacha rinomboshanda kunze kupi?
Meticash inoshanda kunze kupi?
Naira chairo rinoshanda kunze kupi ?
Bond ndiro ramunoda kuti ritenge kunze nekuti raita sei?
nhamo 2016 mari reserve bank of zimbabwe bond notes
Zvinoreva eco wepana ecocash
Ukataura chinhu mubako kana muhova panoita maungira.
Rinenge riri voice rako haro rinenge richidairira , asi hausi iwe unenge uchiri kutaura.
Phenomenon iyi Varungu vanoiti "Echo".
Kana unemari muAccount asi usinga kwanisi kuiita Cash-Out. Inenge iri mari yako hayo asi hausiriwe unenge wakaibata.
Now i understand why VaMasiwa vakaiti inonzi "Eco"-Cash.
nhamo 2016 mari ecocash reserve bank of zimbabwe bond notes
Masasi ekupenga - pastor vachidzinga dhimoni
Pastor vaiedza kudzinga demon , " mweya wepoverty out!!! Demoni rikati ndoendepi imi makapfeka bhachi remubhero"
nhamo 2016 pentecostal dhimoni bhero
Wakamborohwa nenhamo here kushaya pekutangira kushaya zvekuita , kugumirwa kuedza zvese zvichiramba ,kusvika pastage yekuda kutengesa calendar
nhamo 2016 nhamo
Bond Notes: Tsumo dzema bond
Tsumo dzema Bond Notes:
Ane kwacha ane mari hazvienzane neane bond
Charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena
Igaroziva kuti bond hari crosse border
Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye
Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye
Aive ma bearer ave mabond
Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond
Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
Akupa US Dollar ndewako .
nhamo 2016 tsumo reserve bank of zimbabwe us dollar bond notes